Yangon-Bangkok Ah Nazi9Chung Lawng Rau, Bus In Tlawn Khawh A Si Cang Lai. – Onlinenungak
Yangon-Bangkok Ah Nazi9Chung Lawng Rau, Bus In Tlawn Khawh A Si Cang Lai.
ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် ကားနဲ့ ၉ နာရီသာ ကြာတော့မည်
ပဲခူး-ကျိုက်ထို အမြန်လမ်းမကြီး စီမံကိန်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ထံမှ ချေးယူသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈၃ ဒသမ ၈ သန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသည့်အကြောင်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းကတစ် ဆင့် ရန်ကုန်မှ ဘန်ကောက်ကို အချိန် ၉ နာရီတည်းဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ရန် အထောက်အပံ့ပြုမည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်သီလဝါကနေ ဘန်ကောက်ထိ မော်တော်ယာဉ်နဲ့သွား မယ်ဆိုလျှင် ၁၆ နာရီခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးမိုင်အနေနဲ့ အရှည် ၅၇၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ကြီးနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ဖူးမြော်ဖို့ဆန္ဒ ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း မြ ဘုရားကို ဖူးမြော်ချင်ကြတဲ့ဆန္ဒတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ရန်ကုန်-ဘန် ကောက်ခရီးစဉ်ကို ယာဉ်မောင်းချိန် ၉ နာရီနဲ့ရောက်ဖို့အတွက် ရန်ကုန် သီလဝါ ကနေ မြဝတီနယ်စပ်ထိ ၄ နာရီခွဲနဲ့ရောက် ရှိနိုင်ဖို့ ထိုနည်းတူပဲ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က လည်း မြဝတီမဲဆောက်နယ်စပ်ကနေ ဘန် ကောက်ထိ ၄ နာရီခွဲတည်းနဲ့ရောက်ရှိနိုင် အောင် (ADB) အစည်းအဝေးတွေမှာ နှစ် ဖက် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပါတယ် ဟု ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဦးကျော်လင်းက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သီလဝါဆိပ် ကမ်းမှ ဘန်ကောက်ထိ ယာဉ်မောင်းချိန် ၉ နာရီတည်းဖြင့် အရောက်သွားရာတွင် မြို့များကို ဖြတ်သန်းသွား၍မရနိုင်သော ကြောင့် မြို့ရှောင်လမ်းများကိုဖောက်လုပ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုအခါ ဖောက်လုပ်ဆဲ မြို့ရှောင်လမ်းအချို့လည်း ပြီးစီးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြို့တွေထဲကသွားရင် ရန်ကုန်မြို့ အတွက် ထောက်ကြန့်ကတည်းက ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို စတင်ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းအသုံးပြုမှုတွေမှာ မော်တော် ယာဉ်တွေ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေ၊ အနှေးယာဉ်တွေနဲ့ ရောထွေးပြည့်နှက်နေ တဲ့အခြေအနေမှာတော့ ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက်ကို ယာဉ်မောင်းချိန် ၉ နာရီ တည်းနဲ့အရောက်သွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ပဲခူးကျိုက်ထို အမြန်လမ်းမသစ်ကြီးကို ဖောက်လုပ်ခြင်းအပြင် မြို့ရှောင်လမ်းများကိုလည်း ဖောက် လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ခုဆိုလို့ရှိရင် ကျိုက်ထိုမြို့ရှောင်လမ်းဖောက်လုပ်နေတာ မြေသားလုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာ လေးလမ်းသွားမြို့ရှောင်လမ်းအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မြို့ရှောင်လမ်းအပြင် သထုံ မြို့ရှောင်လမ်းကို ဒုံသမိတံတားကစပြီး သထုံမြို့၊ ကျိုက်ကော်သိမ်ဆိပ်တို့ကို ရှောင်ကွင်း၍ ဘီးလင်းမြို့အနီးထိ ဖောက် လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအဆိုပြု လမ်းမကြီး ကျိုက်ထိုမြို့ရှောင်လမ်းနှင့် သထုံ ကျိုက်ကော်သိမ်ဆိပ် မြို့ရှောင်လမ်း မကြီးများပြီးစီးသည့်အခါ ရန်ကုန်သီလဝါ မှ မြဝတီမြို့ထိအရောက် ၄ နာရီခွဲဖြင့် ခရီးပေါက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ကလည်း လမ်းများအဆင့်မြှင့်ပြီးလျှင် မဲဆောက်မြို့နှင့်ဘန်ကောက်မြို့ကို အချိန် ၄ နာရီခွဲနှင့် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်အခြမ်းမှာ သန်လျင်၊ သုံးခွ၊ ခရမ်း၊သနပ်ပင်၊ ပဲခူး၊ ကျိုက်ထို စီးပွားရေးစြင်္ကံလမ်းမအသစ် ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်နေတဲ့ ရန်ကုန် ထောက်ကြန့်၊ လှည်းကူး၊ အင်းတကော်၊ ပဲခူးစြင်္ကံလမ်းပိုင်းနဲ့ဟန်ချက်ညီစွာ ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန် ထောက်ကြန့်၊ လှည်းကူး၊ အင်း တကော်၊ ပဲခူးစြင်္ကံလမ်းတစ်လျှောက် လမ်းဘေးဝဲယာမှာ တစ်စတုရန်းမိုင်ဆိုရင် လူဦးရေသုံးသောင်းတစ်ထောင်ထိ နေထိုင်တိုးတက်နေလို့ ဈေးဆိုင်တွေ လူနေ အိမ်တွေ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ကုန်လှောင် ရုံတွေတိုး တက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလမ်းပိုင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး အနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း GDP သည် မြန်မာနိုင်ငံ GDP ရဲ့ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းထိ ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟု ဒုဝန်ကြီးကပြောသည်။
စီးပွားရေးစြင်္ကံဖြစ်သော သန်လျင် သီလဝါ၊ သုံးခွ၊ ခရမ်း၊ သနပ်ပင်၊ ပဲခူး ကျိုက်ထို စီးပွားရေးစြင်္ကံလမ်းပြီးစီးသွား ပါက ရန်ကုန်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စီးပွား ရေးစြင်္ကံလမ်းမသစ်ကြီးပေါ်လာပြီး နိုင်ငံအတွင်း ဆက်စပ်သွားလာမှုသာမက ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ပျှမ်းမျှတစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရှိသော မြန်မာ့ ဒုတိယအများဆုံး ကုန်သွယ်ဘက် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာမဲခေါင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသော လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများကပါ မြန်မာနိုင်ငံအ တွင်းဖြတ်သန်း၍ ရန်ကုန်မြို့ သီလဝါ စက်မှုဆိပ်ကမ်း၏ ပင်လယ်ထွက်ပေါက် ကတစ်ဆင့် အခြားပြည်ပနိုင်ငံများကို လွယ်လင့်တကူ ကုန်စည်စီးဆင်းစေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်မှုများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် လမ်းဖြတ်သန်းသွားလာ အသုံးပြုခများနှင့် အခြားအခွန်အခတွေပါ ရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ ပဲခူးကျိုက် ထို အမြန်လမ်းမကြီးပြီးစီးရင်တော့ လက်ရှိ ADB ချေးငွေဖြင့် လမ်းအဆင့်မြှင့်လုပ် ငန်းများ စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့အရှေ့ဘက်စြင်္ကံသန်လျင်၊ သုံးခွ၊ ခရမ်း သနပ်ပင် ပဲခူးလမ်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ သီလဝါဆိပ်ကမ်းထိ ခရီးသည်နဲ့ ကုန်စည် များ လွယ်လင့်တကူ လျင်မြန်စွာ သွားလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်စီးပွားရေးစြင်္ကံလမ်းမသစ် ကြီးဖြစ်လာမယ့် သန်လျင်၊ သီလဝါ၊ ခရမ်း၊ သုံးခွ၊ သနပ်ပင်၊ ကျိုက်ထိုလမ်းတစ် လျှောက် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် စီးပွားရေး ဇုန်တွေ၊ သိုလှောင်ရုံတွေနဲ့ ကုန်းတွင်း ဆိပ်ကမ်း Dry Port တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ပြီးတော့ အဲဒီစြင်္ကံလမ်းတစ်လျှောက် မြန် မာနိုင်ငံအတွင်း အခြားဒေသမှလာရောက် သူများအတွက်ပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ များစွာပေါ်ပေါက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဟု ဒေါက်တာဦးကျော်လင်းက ပြောသည်။
Credit : မေငယ်